Hababka ugufiican Minecraft | Isku day hababka ugu wanaagsan ee bilaashka ah
Inicio/Minecraft/Hababka ugufiican ee Minecraft [BILAASH]
0 995 6 daqiiqo akhri
Mid ka mid ah ifafaalaha caalamiga ah marka la eego adduunka ciyaaraha fiidiyowga shaki la'aan waa Minecraft. Ciyaartan bilowgeeda waxay ka tagtay calaamado muujinaya inay halkan tahay in la joogo oo sannadihii la soo dhaafay ay xaqiijisay. Si sax ah sababtaan hadda waxaan dooneynaa inaan uqalmo qodobkaan si aan ugala hadlo qaababka ugu wanaagsan ee Minecraft. Haddii aad jeceshahay ciyaartan, hubaal waxaad ka heli doontaa wax aad ka xiiseyneyso ururintan Minecraft mods.
Mashruucan waxaan ku dhejin doonnaa dhowr nooc oo runtii xiiso leh waxaanan si joogto ah u cusbooneysiin doonnaa. Sidan ayaad had iyo jeer kuheli doontaa kuwa ugu hal abuurka badan sidaa darteed waad tijaabin kartaa. Waxaa xusid mudan in nooc kasta oo ka mid ah ururintan Minecraft mods ay gebi ahaanba bilaash tahay inaad ciyaarto.
Waxaa laga yaabaa inaad xiiseyneyso Iskudhafka ugu fiican ee naga mid ah
Marka lagu daro qaab kasta, waxaan sidoo kale kaaga tagi doonnaa hagitaankiisa si aad wax walba oo ku saabsan uga ogaato ereyo faahfaahsan. Sidaas darteed haddii aad tahay taageere Minecraft, u raaxeyso inaad bilowdo ogaanshaha dhowr ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee Minecraft ee aad ka heli karto shabakadda oo dhan.
Hababka ugufiican ee Minecraft
Mod Bidix 4 Dhintay 2 ee Minecraft
Qaabkan ugu horreeya ee liiska ayaa ka mid ah kuwa ugu caansan, sababtoo ah soo jiidashada weyn ee dad badani dareemayaan mawduucan, qaabkan waxaad ku raaxeysan kartaa waxyaabo badan oo ka mid ah asalka asalka ah. Waa inaad u diyaar garowdaa inaad la kulanto zombies tiro badan oo hub ah iyo gawaari laga soo qaaday ciyaartii asalka ahayd. Habkaani waa abuuris Zach Rey Marisca oo hadda waxaan ka heli karnaa kombuyuutarka.
Haddii aad rabto inaad tijaabiso qaabkan waxaan kaaga tageynaa xiriirka hotfile markaa waxaad bilaabi kartaa inaad la dagaallanto argagaxa Left Dead 2 ee loogu talagalay Minecraft bilaash. Si la mid ah waxaan kuu deyneynaa tusaheeda kala ah Holymod si aad wax badan uga ogaato gaarsiintaan. Taas oo aan kuu xaqiijineyno inaad awoodi doontid inaad ku raaxeysatid saacado badan oo xiiso leh.
Mod Dragon Ball Z ee loogu talagalay Minecraft
Mid ka mid ah mawduucyada aan lagu waayi karin adduunka pixels waa Dragon Ball Z. Tan iyo markii aan ognahay sumcadda weyn ee taxanahan anime uu lahaa sannado badan. Sidaa darteed, hadda waxaan kaa tagnay Dragon Ball Z Mod for Minecraft oo ah mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan ee aad ka heli karto noocyada ugu fiican ee loogu talagalay Minecraft bilaash.
Qaabkan waxaa soo saaray IsFantasmaCraft runtiina juhdi badan ayuu geliyay, runtiina, waxbadan ayuu ciyaarta ka badalayaa sida aan ku naqaano marka loo eego howlgalladeeda. Haddii aad rabto dabeecaddaada "Steve" dabeecaddaadu inay u ekaato mid ka mid ah halyeeyada Z, waxa ay tahay inaad sameyso ayaa ah inaad soo ururiso 7-da kubadood ee masduulaaga ah. Kuwani waxaa laga heli karaa iyagoo loo qaybiyay khariidada oo dhan waxaadna ka caawin kartaa naftaada raadaarka masduulaaga oo ku jiri doona liiskaaga.
Markii aad maamusho inaad hesho 7da qaybood waa inaad abuurtaa 7 budo oo cirfiid ah oo aad ka heli karto dharka iyo muuqaalka dabeecadaada aad ka hesho Dragon Ball Z. Shaki la'aan tani waa mid ka mid ah hababka ugu fiican ee Minecraft ee aad ka heli karto adigana ku heli kartaa bilaash Marka xigta isku xirka. Waxaan sidoo kale kaaga tagaynaa tusahiisa oo dhameystiran gudaha Holymod markaa waad cadeyn kartaa shaki kasta oo aad qabtid.
Flash mod for Minecrka dib
Tani waa mid ka mid ah noocyada ugu jecel ee dad badan sababtoo ah marka lagu daro inaad ku raaxeysan karto xawaaraha dabeecaddan, waxaad sidoo kale ku raaxeysan kartaa dhammaan geeddi-socodka helitaanka awoodahan. Taasi waa in la yiraahdo inkasta oo qaabku kuu oggolaanayo inaad kordhiso xawaaraha astaamaha, haddana waa inaad sidoo kale fulisaa hawl aad ku qaban karto. Tani waa farshaxan fudud, laakiin waa inaad si sax ah u sameysaa si wax walba ay si sax ah ugu shaqeeyaan.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad kala soo degsato qaabka Flash-ka ee 'Minecraft' isku xirka inaan kaa tagno. Ka dib iyo markii la rakibo waa inaad bilowdaa ciyaarta oo aad abuurtaa mashiinka dardargelinta walxaha. Iyadu waxaad u baahan doontaa 44 baloog iyo 7 baaldi oo biyo ah iyo sidoo kale kabaal.
Markaad gasho mashiinka, hillaac ayaa kugu soo dhacaya, adiga oo ku siinaya dhammaan xawaaraha halyeeygan weyn. Qaabkani waa abuurista EliotDt waadna ku raaxeysan kartaa hadda, marka qaabka la hawlgeliyo waxaad ku dhaqaajin kartaa furaha "X" xawaaraha kor u kaca iyo yaraanshaha Laakiin intaas maahan, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa dhar kala duwan oo ka socda Flash.
Maqaarka moodeelka ah ee Mob kasta oo loogu talagalay Minecraft
Shaki la'aan, tani waa mid ka mid ah hababka ugu fiican ee loogu talagalay Minecraft, waxay ka kooban tahay inaad qaadan karto qaab kasta oo ka mid ah mobs ee ciyaarta, ha noqdaan cadaw, tuulo iyo xayawaan. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah inaad nuugto muuqaalka bartilmaameedkaaga isla markiiba waxaad bilaabi kartaa inaad si caadi ah u ciyaarto, laakiin muuqaal kale.
Habkaani waa abuuris Darsallo wuxuuna ka dhigayaa qaabkan qof walba si aan ugu raaxeysanno. Way fududahay in la isticmaalo maaddaama ay tahay inaad kaliya riixdo furaha lagu soo bandhigi doono shaashadda si loo doorto koox-kooxeedka. Haddii aad rabto inaad tijaabiso maqaarkan moodeel kasta oo Mob ah oo loogu talagalay Minecraft, waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ka soo degsanaya boggan. hotfile inaan kaa tagno si aad ugu raaxeysato qaabkan cusub ee ciyaarta.
Muuqaalka kale ee xiisaha leh ee qaabkani waa markii aad koobiyeynayso muuqaalka dabeecad sidoo kale waxaad qaadan doontaa dhammaan astaamaheeda. Si kale haddii loo dhigo, animations-ka markaad khariidada ku wareegeyso waxay lamid noqon doonaan mooryaanta aad haysato. Dabcan, waa la qaatay waqtigaas waana taas sababta ay ugu qasban tahay inay kujirto ururintaada 'Minecraft mods collection'.
Qalabka Gulliver ee loogu talagalay Minecraft
Shaki la'aan tani waa mid ka mid ah qaababka soo jiita dareenka ugu badan ee ka dhex jira ciyaartoyda Minecraft, tan maxaa yeelay waxaad saameyn toos ah ku yeelan kartaa ciyaarta. Kani waa qaabka loo yaqaan 'Gulliver mod' oo, sida aan qiyaasi karno, noo oggolaanaya inaan wax ka beddelo cabbirka dabeecadeena, sidan ayaan ugu ciyaari karnaa cabbir ka duwan. Tani waxay saameyn toos ah ku yeelan kartaa ciyaarta, sidaa darteed waa inaad tixgelisaa waxyaabaha qaarkood.
Habkaani waa abuuris Mudane Wood waana ka soo dagsan karnaa tan isku xirka In aan kaa tagno, marka aad hesho, kaliya waa inaad qortaa "/ cabir" ka dibna qiimaha cabbirka aad ka rabto dabeecadaada. Laakiin waa inaad maskaxda ku haysaa in sidii aan horay u sheegnay, cabirku uu saameyn ku yeelanayo ciyaarta. Taasi waa in la yiraahdo kan weyn ee aad yeelan doontid xoog badan, laakiin sidoo kale way fududaan doontaa inaad aragto cadawga. Dhanka kale, inaad yartahay waad adkaan doontaa inaad hesho, laakiin waad daciifin doontaa.
Xayawaanka Mod Epic ee Minecraft
Mid ka mid ah hababka ugu fiican ee loogu talagalay Minecraft iyo inaad sidoo kale ku heli karto bilaash, waxa kaliya ee ay tahay inaad maskaxda ku hayso ayaa ah in xayawaankani ay gaar u yihiin qaabkaas. Laakiin taasi waxay saameyn toos ah ku yeelan kartaa ciyaarta, taasi waa, inaad ka faa'iideysan karto iyaga oo ay u dheer tahay taabashada bilicsanaanta oo kale. Sidaa darteed, tani waa mid ka mid ah hababka aan ka maqnaan karin ururintaada.
Qaabkan waxaa abuuray Buecher Wurm oo aad kala soo bixi kartaa ka isku xirka Waxa aan kaaga tagnay, xoolaha dhexdooda oo aan ku iftiimin karno qaabkan waxaan dhihi karnaa waxaa jira doofaar dhooqo ah. Tani waxay leedahay gaar ahaaneed oo leh animation aad u qosol badan oo lagu xalliyo dhoobada, waxaad sidoo kale heli kartaa lo'da jaalaha ah, sidoo kale waxaa lagu daboolay ubaxyo waxaana la sheegay in u dhowaanshaha dalagga uu kori doono si dhakhso leh.
Waxaan sidoo kale leenahay ariga markii la dilo uu geyn doono geesaha iyo qalabka kale ee aad u isticmaali karto inaad ku farsameyso waxyaabo gaar ah. Iyo si loo dhammeeyo waxaan xusi karnaa digaagga casaanka leh boqoshaada gadaashiisa, tan waxaa laga heli karaa biome-ka likaha. Awoodiisa ayaa ah in la dhigo ukumo ur leh oo hoos u dhigaya cadawga.
Boorsada Mod ee Minecraft
Kani waa mid ka mid ah hababka ugu wax ku oolka ah ee aad ka heli kartid habka loo yaqaan 'Minecraft mods collection' ee ay tahay inaad haysato marka aad ciyaareyso, maadaama ay ku habboon tahay bilowga. Laakiin sidoo kale dadka doonaya inay ku kacaan tacabur inay isku dayaan inay ka adkaadaan masduulaagii. Sidoo kale waxay ku habboon tahay kuwa jecel inay abuuraan magaalo ay lagama maarmaan u tahay inay helaan meel ay ku soo ururiyaan dhammaan noocyada canaasiirta.
Habkaani waa abuuris Mudane Wood oo wuxuu nooga tagayaa ikhtiyaar aan ku soo dejino si aan ugu ciyaarno kombuyuutarka. Haddii aad rabto inaad tijaabiso qaabkan waxaan kaa tageynaa kan isku xirka si aad u hesho oo aad u bilowdo tijaabinta. Qaabkani wuxuu ku darayaa astaamo aad u wanaagsan waxa boorsadaadu tahay. Marka la soo koobo, marka lagu daro haysashada qadar ballaadhan oo wax lagu kaydiyo, waxay kaloo keentaa astaanta sariirta. Tan waxaad ku degi kartaa meel kasta oo khariidada ah.
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato waxyaabaha ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'Minecraft mods', waxaan kugu martiqaadeynaa inaad ku soo biirto bulshadayada Jeexdin. Halka aad ka heli karto wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan aruurinta qalabka loo yaqaan 'Minecraft mods' iyo ciyaaro kale oo badan.
Hababka ugufiican ee Minecraft mooska masduulaaga ball z ee miinada miinooyinka mods mods bilaash ah oo loogu talagalay miinada mods for minecraft
Cyborg Mod oo ah Dhexdeenna